Izwi likaWinnie Mahlangu lanika abesifazane izwi kuleli - Ilanga News
Home Izindaba Izwi likaWinnie Mahlangu lanika abesifazane izwi kuleli
Izwi likaWinnie Mahlangu lanika abesifazane izwi kuleli
MHLELI: Abalaleli boKhozi FM, abasakazi nezisebenzi bagqemeke engeqiwa ntwala ngokudlula emhlabeni kwengqalabutho nevulandlela labesifazane kulo msakazo, uWinnie Mahlangu (osesithombeni). UMafungwase woKhozi FM (njengoba ebebuye abizwe kanjalo), waba ngumsakazi wokuqala wesifazane owayibamba ishisa nesiqhoqho samadoda ayehloniphekile ngaleso sikhathi. Kulawo madoda singabala kuwona uKing Edward “KE” Masinga, uShobane kaMangethe, uHubert Sishi, uDouglas “uMagayazidlele” Mfeka, uJoshua “uMfana waseNkwezela” Mlaba nabanye abaningi.
Ukusebenza namadoda amaningi ungowesifazane wedwa ngesikhathi lapho ubandlulululo lwaludla lubi, kwakuba nezinselelo eziningi. Siyabonga siyanconcoza ukuthi uWinnie Mahlangu wabhekana nalezo zinselelo futhi wazinqoba ngenxa yobuhlakani, ukuhlonipha nesizotha ayenaso. Insimbi wayibamba ishisa injalo waze wavulela nabanye besifazane ithuba eliyingqayizivele lokusakaza naye emsakazweni. Akagcinanga ngokunqoba izinselelo nokuba nguMafungwase woKhozi FM, waphinde waba yivulandlela elaphendlela abesifazane indlela eya empumelelweni kwezokusakaza, waba neqhaza elikhulu ekubaqeqesheni ukuze bagcine sebedumile njengaye.
Omunye umsakazi wesifazane owafikela kuyena futhi owaqeqeshwa nguyena, nguZamambo Mkhize. UZamambo wancela kogwansile kuWinnie Mahlangu njengoba wagcina ekhulile esengumphathi kwaSABC. UWinnie Mahlangu wayengagcini ngokwakha abasakazi ayesebenza nabo, izinhlelo zakhe okubalwa oluthi “Iziko neKhaya” zazakha imindeni, zigqugquzela inhlonipho, impilo enhle nobumbano emakhaya. Singasho singananazi ukuthi uWinnie Mahlangu waba neqhaza elikhulu ekwakheni isizwe esimnyama esiphokophele phambili ezikhathini lapho abantu abaningi babephila ngaphansi kwengcindezelo.
Amagalelo akhe amenza wahlonishwa izwe lonke ngabesilisa nabesifazane ngenxa yeziyalo zakhe ezazikhulisa abancane nabadala. Izwi lakhe elimtoti nelihehayo, lalidala ukuthi abaningi bakuthande ukulalela umsakazo futhi kuningi ababekuzuza kuyena uma sebelalele izinhlelo zakhe. Namhlanje izwi lembokodo emisakazweni eyahlukene liyahlonishwa ngenxa yabantu abafana noWinnie Mahlangu abayibamba ishisa belwela isithunzi nokuhlonipheka kwezwi lembokodo. UWinnie Mahlangu wasebenzisa izwi lakhe emsakazweni ukuze imbokodo ibe nezwi elizwakalayo KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika yonkana.
Ngala mazwi, siduduza umndeni nezihlobo zikaWinnie Mahlangu, abalaleli nabasakazi boKhozi FM. Sithi sonke sigqemeke udume ngokuhamba kwale ngqalabutho evulandlela elayibamba ishisa kodwa labekezela kwaze kwaba sekugcineni. Sithi hamba kahle Mafungwase woKhozi FM. Uyibekile induku ebandla. Amagalelo neqhaza lakho esizweni kuyohlala kubonakala futhi kukhumbuleka.
Previous articleIzingelwa yiPirates injini yoSuthu
Next articleINKOSI ITHI IZOQHUBEKA EZINYATHELWENI ZIKAYISE